Dowladda Somalia oo sheegtay Dib u howlgelindonto Hotel Curubo ee magaalada muqdisho – STAR FM SOMALIA
Dowladda Federalka Somalia ayaa shaaca ka qaaday dib u howlgelinta Hoteelka Curubo ee Magaalada Muqdisho inay ku baxeyso qarash aad u badan.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Xukuumadda Somalia Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa sheegay inay muhiim tahay dib u dhis lagu sameeyo Hoteelka Curubo oo ka mid ah Hantida Qaranka, balse dagaaladii dalka ka dhacay ku bur buray.
Waxa uu sheegay in Wasaaradiisa ay ku dadaalayso sidii dib loogu howlgelin lahaa Hoteelkaasi, isaga oo tilmaamay inay u raadinayaan Shirkado iyo Ganacsato Soomaaliyeed oo qarash ku bixisa dib u dhiska Hoteelkaasi.
“Waxaan balan qaadeynaa inaan u raadino qorshihii lagu dayactiri lahaa xarumaha dowladda ee bur bursan, gaar ahaan inta Wasaaradeyda hoos timaada, waxaan la kulmeeynaa shirkado iyo dad Soomaaliyeed oo doonaya in Hotelka Curubo ay geliyaan 60 Milyan oo doolar.” Ayuu yiri Wasiir Maareeye oo ka hadlaayay xaflad lagu xusaayay Maalinta Dhalinyarada oo Muqdisho ka dhacday.
Hoteelka Curubo ayaa ka mid ah meelaha ugu muhiimsan dalka ee loo dalxiis tagi jiray, inkastoo wixii ka dambeeyay Burburkii Dowladii dhexe ee dalka Hoteelkaasi saameyn weyn ay ku yeelatay dagaaladii dalka ka dhacay.
Wasiirka Warfaafinta Somalia ayaa Bishii lasoo dhaafay kormeer uu ku tagay Hoteelka Curuba ku dhawaaqay in dib loo howlgelin doono Hoteelkaasi.